N'ihi na afọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ a 3D nkiri, ị gara-eme ihe nkiri, donned acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie akwụkwọ iko, ma nọdụ azụ ịhụ ihe onye ọzọ kere. Mgbe e mesịrị 3D fim ẹkedude ke domed eme ihe nkiri na na mma iko, ma ka, gị ntụrụndụ e dictated site na ihe onye ọzọ chere na na-etinye na ihuenyo. Modern ese foto ekwe ka ị na-videographer, director, na-emeputa gị nnọọ onwe fim. Ọbụna ụfọdụ abịa na ikike jikọọ a projector maka nzi HD agụụ. Ebe a na-iri nke kasị mma 3D video ese foto i nwere ike ịhụ.
1. Panasonic HDC-Z100000 ejima oghere camcorder
Igwefoto a nwere ike igba na ma 2D ma ọ bụ 3D, otú i nwere ike weghara videos ọ bụla ọnụ ọgụgụ. Ọ nwere ikike nke nso-elu gbaa, kwa, na a nnukwu nso nke 17,7 "na 32mm. Ọtụtụ ndị ọzọ na ese foto ata ahụhụ site na doo anya mbipụta n'oge a anya. Ejima anya m na-enye 3D oyiyi dị nnọọ ka anya gị ga-ahụ ha. Ọ na-eji abụọ elu uche 3MOS sensọ na ekpe na nri. The anya m na-f / 1.5 na a mkpuchi ka n'ihu oghere. The processor bụ ike nke na 1080p60, ma ọ bụ 60 na-aga n'ihu okpokolo agba a abụọ, n'ihi ya, ngwa ngwa edinam dị ka akpaaka agbụrụ na-weghaara na crystal doo anya. Ozu ịke anya dị ka a ọkachamara igwefoto, ọ na fim dị ka a ọkachamara igwefoto, kwa.
Igwefoto a bụ atụmatụ-juru n'ọnụ, na ihe dị elu 3MOS usoro, 1080p60 ndekọ ike, na 32GB nke wuru na ebe nchekwa. The electronic nchọta onyonyo dị mfe iji, ma ị na-enwe ntuziaka mgbanwe ị pụrụ ime ka. Agba bụ gosiri dị ka ezi, nke bụ mgbe niile ihe kwukwara gbakwunyere, otú e nwere bụ na-erughị i nwere ime na edezi usoro. Igwefoto a mbiet àgwà dị nnọọ elu, na ezi ezu ma nnọọ nta mkpọtụ. The nnukwu LCD nchọta onyonyo (3.5 ") na-eme ka ọ dị mfe ịmata kpọmkwem ihe ị na-dí ndu. Igwefoto ahụ bụ a bit ibu karịa ndị ọzọ ese foto na klas a, a na-eme ka ọ a aka arọ, kwa.
Nke a ọhụrụ nlereanya ke Handycam akara bụ a abụọ ọwa ọsọ ọsọ camcorder, onwem na abụọ zuru ezu HD sensọ. Ọ fim na 1920/1080 na ma ọwa na ezi HD na ma mkpebi. The nnukwu 3.5 LCD ihuenyo-enye ohere maka ọnụọgụgụ na mfe ndekọ. The slimline casing dị mfe jide ma jiri njikwa. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na fim ke 2D, gị videos ka ga na-crisp ma dị ọcha. Igwefoto a nwere ụfọdụ ndị ọzọ jụụ atụmatụ, dị ka a GPS, ngwa anya image stabilization, na ìhè gụnyere agbakwunye gị onwe gị soundtrack.
Mbụ a ntinye site JVC na ndepụta bụ a igwefoto na nwere ụfọdụ n'ezie oké atụmatụ. Topping na ndepụta bụ eziokwu na ọ bụ ike fim ke ala ìhè, ihe ọzọ ese foto nwere ike na ọgụ na mgba. Ọ na-adịghị ida oyiyi mma ma ọ bụ agba àgwà mgbe ọkụ gbadaa. Na-amasị gị na-enwe ike iji aka ịgbanwe mwube gị? Ị ga a n'anya igwefoto. Ọ nwere zuru ntuziaka ime ka otu nhọrọ. Na batrị a bit nnukwu, kama ka pụtara na ọ nwere ogologo ndụ batrị, otú i nwere ike na-agbapụ maka ogologo oge. Ọ na atụmatụ a nnukwu esịtidem ebe nchekwa ikike - 64GB flash ebe nchekwa na-kpọmkwem - na a na kaadị ebe nchekwa oghere maka mmezi ụlọ. The 3.5 "LCD ihuenyo atụmatụ touchscreen ọsọ ọsọ, kwa. The anya m bụ F1.2 na backlit CMOS sensọ, na okwu bụ proprietary ka JVC, na-akpọ Biphonic, otú ị ga-esi na nso ụda na-aga na gị 3D nkiri.
Panasonic alaghachikwuru anyị na ndepụta na ha HC-X920 3D njikere camcorder. Ọ na-enye ndị na-dị ukwuu maka ndị na-na-ekekọrịta ihe ha gbaa. The Gbaanụ na Share na atụmatụ dị mgbe igwefoto na jikọọ na a Wi-Fi na netwọk. Ọ pụtara na ị nwere ike izipu gị video onye ọ bụla, ma ọ bụ livestream gị ndepụta na ihe Ustream ọwa. Kere nte enwe ike ịkọrọ a ihe omume pụrụ iche na onye anya dị ka ọ na-eme! Ọ bụrụ na ị chọrọ iji igwefoto a dị ka a n'ụlọ ma ọ bụ azụmahịa nche ngwaọrụ, ọ atụmatụ abụọ na-ụzọ nlekota oru ike. Oghere bụ ihe F1.5 12X ngwa anya mbugharị, na Ọ captures video n'ezi 16: 9 na 8,49 MP.
Nke a na-ukwuu gosiri dị ka oké mmeghe igwefoto na Ome na zuru HD. Ọ bụrụ na ị na-amasị ịgbanwe gị ntọala na bụghị ịdabere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe kenyere n'anya, igwefoto a bụkwa gị, gụnyere na-agbanwe agbanwe na-elekwasị anya. Otu mfe oghere mgbanaka-enye gị ohere ịgbanwe ma na-elekwasị anya na mbugharị. Ọ na-eji Canon si CMOS mmetụta, na ọ agafewo image stabilization omume na uche ọbụna si nnọọ ihe ọ bụla shake. Karịa ihe niile ọzọ, o nwere oké oyiyi mma. Mgbe niile, ọ bụghị na ihe ị chọrọ ịzụ a igwefoto maka?
Nke a igwefoto nwere ike, dị ka ọtụtụ, gbaa video ma ka na-photos ma, ma N'adịghị ka ọtụtụ, ọ Ome ọma ka oyiyi. Wuru iji yiri a DSLR na oghere mmasị, ọ nwere ike na-12.8MP oyiyi ekele a CMOS mmetụta na a backlight, na a 10x ngwa anya mbugharị ikike na oghere. Ugbu a n'ihi na ndị na videos, ọ Ome na zuru HD na ruo 500 okpokolo agba kwa abụọ. Ọ na atụmatụ a oge-lapse mode maka Wachowski wanna-bes re-eweputa ha mmasị Ebeonodu. N'ihi na ndị na-achọ ịkọrọ ha na-agbata n'ọsọ nwetara na ndị ọzọ, e nwere ihe ngwa dị na ị nwere ike ibudata na-playback gị stills ma ọ bụ vidiyo na a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ, gụnyere mbadamba na smartphones.
Canon bụ azụ na a fun igwefoto na-emepụtakwa ụfọdụ pụtara ọrụ. Ọ bụ ọkachamara àgwà igwefoto na ka mfe iji. The DSLR mmetụta n'ime nwere ọtụtụ etoju ma na ọ na-ese siga atọ mgbawa camcorders na video àgwà, nke na-amị fim na anya dị ka ha nwe na nnukwu ihuenyo. The anya m bụ kennyeghari dị nnọọ ka ihe SLR si. Mpụga isi mmalite nwere ike plugged na ekele na HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri na osisi. E nwere otu nnukwu nchekwa ikike maka igwefoto a na abụọ SD kaadị ohere mepere. Ụda àgwà bụ ike ekele na XLR ọdịyo.
Na-na ị dị nnọọ ibido na dijitalụ ahịa? Nke a bụ a zuru okè ntinye igwefoto maka gị. Affordably ọnụ ahịa ya, ma ka juru n'ọnụ na atụmatụ, ọ na-enye juru 1080p elu definition video na ya nwere ike gbaa 2D na mp4 format, zuru okè n'ihi na òkè. Nchekwa onwe ọnọdụ atụmatụ enyere gị aka na ikpughe na Baịbụl hiwere isi n'ebe ihe, gụnyere a ọdịdị ihu na-elekwasị anya. Ọ esetịpụ ya onwe na ala ìhè ọnọdụ, na-enye gị ezi video n'achọghị banyere ìhè etoju. Nchekwa onwe agba ntọala hụ na gị na videos ga-egbuke egbuke ma na crisp. A touchscreen 3 "LCD ihuenyo-enye gị ohere ego gị gbaa na inyocha ha na ihuenyo mfe. E nwere otu SD kaadị oghere maka nchekwa.
N'ihi na ihe n'ezie pụrụ iche, igwefoto a na-abịa na nke ya projector maka nzi replays n'abalị ị gbaa fim. Dị nnọọ na-ezo ihe projector kwupụta ọ bụla ewepụghị elu, ọbụna ìhè anyanwụ. The videos igwefoto a Ome bụ pụtara, na ị na-ahọrọ nke 1920p24 ma ọ bụ 1080p60 mkpebi. A sọrọ ndekọ ikike pụtara na ị nwere ike igba ma mkpebi n'otu oge. Ka oyiyi a pụrụ jidere na 20MP na a 12X ngwa anya mbugharị, na i nwere ike gbaa obosara-n'akuku photos bụrụ na ị chọrọ. The wuru na-32GB ebe nchekwa na-ahapụ gị nkiri ogologo ụbọchị nile. Image stabilization na a My Voice Cancelling atụmatụ ekwe ka ị nwere otu ebe gbaa na ụda lekwasịrị anya na isiokwu gị, ọ bụghị gị.
N'ihi ya, e na ị nwere ya - 10 nke kasị mma HD ese foto i nwere ike ịhụ. Ndepụta anyị na-agụnye a dịgasị iche iche nke ahịa na ekwekọghị, otú i nwere ike họrọ onye ị chọrọ.
Top Iri 3D Video Players maka PC
Video Cropper maka Mac: Olee otú akuku Video na Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú Mee awụlikwa elu he a Click
> Resource> Video> Top Iri 3D Video ese foto